Xukuumada Somaliland oo Maxkamada sare ugudbisay arrimaha doorashooyinka - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Xukuumada Somaliland oo Maxkamada sare ugudbisay arrimaha doorashooyinka
Golaha Wasiirrada Somaliland Oo go’aamiyey In Maxkamadda Sare Loo Gudbiyo Go’aan-ka-gaadhista Doorashooyinka, Siyaasado Qaranna Ansixiyey.
Fadhigii 62aad ee golaha wasiirrada Somaliland ku yeeshay habka Maqalka iyo Muuqaalka (Video Conference) oo uu shir-guddoominayey Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa lagaga dooday qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee wakiillada iyo deegaanka, iyada oo sidoo kalena lagu ansixiyey siyaasado qaran.
Dhinaca kale, wuxuu goluhu ansixiyey siyaasadda shaqo abuurka ee Somaliland oo ay soo diyaarisay wasaaradda shaqo gelinta, arrimaha bulshada iyo qoyska.
Ugu danbayn waxa goluhu dood dheeer ka yeeshay qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee wakiillada iyo deegaanka, wuxuuna goluhu go’aamiyey in loo gudbiyo maxkamadda sare ee Somaliland.
Previous articleWasiir Cawad oo ku eedeeyay agaasimaha wasaaradda in uu ka danbeeyay fashilka warqadaha uu ku magacaabay ehelkiisa
Next articleMareykanka oo ka hor yimid muddo kororsiga Dowladda Farmaajo
Minneapolis Police Open Probe Into Reports Ilhan Omar’s Allies Harvested Piles...
How did an August primary election in Minneapolis turn into a...